ဆရာကံချွန်အမှတ်တရကာတွန်းများ – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Posted on April 30, 2010 April 30, 2010 by kyawkyawoo	Posted in ဆရာကံချွန်, UncategorizedTagged ဆရာကံချွန်, ဆရာကံချွန်အမှတ်တရကာတွန်းများ, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, Kan Chun, myanmar cartoon, Myanmar Muslim, myanmar muslim carttoonist
ယဲ့ယဲ့လေးနဲ့နောက်ဆုံးဖုန်းခေါ်တော့ကြိုးးစားပြောတာ ကြားယောင်နေမိ တယ်။
သူ့နာမည်က အိုမာလို့ ခေါ်ပါတယ်။
One thought on “ဆရာကံချွန်အမှတ်တရကာတွန်းများ”
Visited. The butterfly are so sweet 🙂 I like it.
Earth, the best ever view from outer space